Finland kama jirto damaanadqaad megangelyo- u diyaargarow sidoo kale go'aan diidmo ah - Asylum in Finland
Sanadihii ugu danbeeyay dad badan ayaaa Yurub u soo galay safar halis ah iyagoo aaminsan in ay helayaan megangelyo iyo shaqo, dhaqaale lacageed fiican iyo in marka dambe uu qoysku u imaanayo. Qaar badan ayaa qalbijabay markii wixii ay filayaan ay rumoobi weysay.
Shuruudaha megangelyada iyo ogolaanshiyaha kale ee degitaan waxaa si cad loogu qeexay sharciga waana in aad heysataa sababo culculus si aad u joogto Finland. Tusaale ahaan faqrinimo, derajo bulsheed liidata ama shaqo la’aan kuma filna in looga helo megangelyo ama ogolaanshiyaha kale ee degitaanka dalalka Midowga Yurub.
Haddii aad megangelyo ka codsaneyso Finland, codsigaada si shaqsi ah ayaa looga baaraandegayaa. Tan waxaa loola jeedaa in ay saraakiishu baarayaan in aad adigu shaqsiyan xaq u leedahay badbaadin caalami ah. Waa in aad u diyaargarowdaa in helitaanka go’aanka codsigaada megangelyo uu waqti dheer qaadanayo. Markaas kaddibna helitaanka megangelyo ama ogolaansho degitaanka oo kale ma ahan wax cad.
Xubnaha qoyskaada ee dibadda jooga waxey codsan karaa ogolaanshaha degitaanka marka aad adigu go’aan ogolaansho ah ka hesho codsigaada megangelyada. Haddii aad naftaada iyo qoyskaada u hesho ogolaanshaha degitaanka xittaa sanado badan ayaad kala maqnaan kartaan.
War-saxaafadeed: “Finland ma ahan janno- hubi waxa aad ogtahay inta aadan Yurub soo aadin”